SGBE Fampidinana fampiharana ho an'ny Android [2022 Mahazoa App] | APKOLL
Salama daholo, te hanana fomba haingana hahazoana vola ianao? Raha eny, dia eto miaraka amin'ity rindrambaiko Android mahagaga ity isika, izay fantatra amin'ny hoe SGBE App. Izy io no fampiharana Android farany, izay manolotra fampiasam-bola an-tserasera amin'ny volamena, volafotsy ary BTC.
Afaka mahita rindranasa hafa eny an-tsena ianao, izay mety hanolotra ireo serivisy ireo. Fa araky ny fantatrao momba ny fisolokiana an-tserasera dia mety hampidi-doza tokoa ny fampiharana tsy voamarina. Afaka mahazo ny mombamomba anao sy ny volanao manokana ny olona raha mampiasa fampiharana tsy voamarina ianao.
Noho izany, eto izahay miaraka amin'ny fampiharana ara-barotra SGBE, izay manome ny rafitra tsara indrindra sy azo antoka hampiasana vola sy hividianana vola tsy misy hetsika tsy ara-dalàna. Fampiharana voamarina izy io, midika izany fa fampiharana ara-dalàna azonao itokisana rehefa manome fampahalalana.
Manome fomba samihafa ahazoana vola tsy misy fampiasam-bola ihany koa. Izahay dia hizara izany rehetra izany aminareo rehetra. Noho izany, mijanona miaraka aminay fotsiny hahafantatra momba ireo fika sy fomba tsotra ireo. Raha hampiasa azy io ianao dia mamporisika anao hijanona miaraka aminay vetivety izahay hahafantarana momba ny famerenana fampiharana SGBE, alohan'ny hampiasana azy.
Topimaso momba ny SGBE App
Izy io dia fampiharana Android, izay manolotra fanitsaka an-tserasera hampiasa vola sy hahazoana tombony. Io no fomba haingana indrindra hampitomboana ny volanao ary koa ny fomba azo antoka indrindra. Izy io dia iray amin'ireo fampiharana tsotra, izay manolotra anao hisintona amin'ny fotoana rehetra hanangonana ny volanao.
Raha te hampiasa vola amin'ny fanitsahana ianao dia tsy maintsy mamorona kaonty amin'ny varotra SGBE, izay tsy dia sarotra ny manao izany. Raha vao sambany ianao no manao izany dia mila ny nomeraon-telefaoninao fotsiny ianao. Vantany vao nanokatra ity fampiharana ity ianao dia mila mampiditra ny laharan-telefaonanao.
Hahazo kaody OTP amin'ny laharana finday ianao. Mila miditra an'io kaody io fotsiny ianao dia efa vonona ny kaontinao. Hahazo 1000Rs koa ianao amin'ny fanaovana kaonty, izay azonao ampiasaina hitsapana izany koa Mahazo App. Ao amin'ny tabilao varotra dia hanana safidy roa lehibe ianao.
Ny voalohany dia Buy Up, izay hampitombo ny fampiasam-bola raha toa ka miakatra ny varotra. Ny faharoa dia Buy Down, raha mampiasa vola amin'ity safidy ity ianao dia hahazo vokatra mitovy fa amin'ny fomba mifanohitra. Noho izany, manaova varotra ary mahazo vola haingana.
Tena tsara ny fizotran'ny fifanakalozana. Mila ampidirinao fotsiny ny anaran'ny kaontinao amin'ny banky, ny laharan'ny kaontin'ny banky ary ny kaody IFSC. Rehefa mandefa an'io fampahalalana io ianao, dia hifandray ny kaontinao amin'ny banky sy ny kaonty varotra. Azonao atao ny manala ny volanao amin'ny fotoana rehetra amin'ny 27/7.
Betsaka ny endri-javatra hafa azonao jerena amin'ny fijerena ny tetikasa SGBE. Noho izany, misintona fotsiny ity fampiharana ity ary manomboka mahazo vola. Raha manana olana amin'ny fampiasana ity app ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Anaran'ny fonosana com.rlg.rlg1
Developer PT MIAO YIN TECHNOLOGY
Araka ny voalazanay ny sasany amin'ireo endri-javatra amin'ity fampiharana ity, dia miaraka aminareo rehetra, fa misy bebe kokoa. Noho izany, hizara lisitra tsotra amin'ireo endri-javatra fototra miaraka aminareo rehetra izahay. Azonao atao ihany koa ny mizara ny traikefanao aminay amin'ny alàlan'ny dingana mitovy.
Fomba mora hahazoana vola
Misintona 24/7 misy
Makà Voucher maimaimpoana
Raha misintona ny SGBE Apk dia azonao atao ny mitsidika ny Google Play Store na koa mampidina azy avy amin'ity pejy ity. Ny bokotra fampidinana dia misy eo an-tampon'ny sy eto amin'ity pejy ity, kitiho eo izy ary miandry segondra vitsy dia manomboka ho azy ny fisintomana.
SGBE App no ​​fampiharana Android varotra tsara indrindra, izay manolotra anao hahazoam-bola haingana. Ampidino ity rindrambaiko ity ary atombohy ny fitadiavana vola. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny Website.
Sokajy Apps, Business Tags Mahazo App, SGBE, SGBE Apk, App SGBE Post Fikarohana
Among Us Skin Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android